Jiaozi (Chinese ravioli) | Njem zuru oke
Ntụziaka ọdịnala a maka jiaozis nke China gụnyere ihendori na ntuziaka ka esi eme mee onyinye. Ighaghachi azụ dị ihe 48 bọọlụ.
2 iko ntụ ọka niile
1 iko esi mmiri
Kabeeji (Napa kabeeji)
3 teaspoons nnu, kewara
1 paụnd anụ ezi ala
1/4 iko finely chopped green eyịm, na n'elu
1 mmanya ọcha TB
1 teaspoon ọka
1 teaspoon mmanụ sesame
White ose Dash
1/4 iko soy ihendori
2 - mmanụ ihe oriri tablespoons 4 -
Bee osisi kabeeji n'ime eriri dị mkpa. Gwakọta ngaji nnu abụọ ma hapụ ka ọ zuo ike maka nkeji ise. Afanyekwa na oke mmiri. N'ime nnukwu efere, jikọta kabeeji, anụ ezi, yabasị, mmanya, ọka, nnu, 1 ngaji nke mmanụ sesame, na ose ọcha. Na efere, gwakọta ntụ ọka na iko 1 nke mmiri na-esi esi mmiri ruo mgbe ngwakọta na-etolite. adụ mgwakota agwa. Igwakorita mgwakota agwa na ala na-enweghị ntụ oyi maka ihe dị ka nkeji 5, ma ọ bụ ruo mgbe ọ ga-eji ire ụtọ. Kewaa mgwakota agwa na ọkara. Mee ọkara nke ọ bụla n'ime mpịakọta ma bee mpịakọta ọ bụla n'ime mpekere. Mee okirikiri ma debe 1 ngaji nke ngwakọta anụ ezi n'etiti etiti. Welite akụkụ nke gburugburu wee tuo 5 folda kee akpa iji kechie ngwakọta. Afanyekwa n’elu. Tinyegharịa ihe ndị fọdụrụ na mgwakota agwa na ndochi. Iji kpoo ahụ ọkụ a wok ma ọ bụ nonstick skillet ruo mgbe ọkụ. Tinye 1 ngaji nke mmanụ ihe oriri, na-agbanye pan iji kpuchie akụkụ ya. Ọ bụrụ na ị na-eji skillet nonstick, tinye 1/2 tablespoon nke mmanụ ihe oriri. Tinye 12 ravioli na otu akwa na wok na ighe nkeji 2, ma ọ bụ ruo mgbe okpuru ya bụ aja aja aja. Tinye iko mmiri 1/2. Kpuchie ma sie nri nkeji 6-7, ma ọ bụ ruo mgbe mmiri nabatara. Tinyegharịa usoro a na ravioli fọdụrụ. Iji mee ihendori, na obere efere, gwakọta soy sauce na 1 teaspoon nke mmanụ sesame. Ije Ozi na dumplings.
Ozi ndi ozo - Gastronomic Capital of Asia
Isi mmalite - Wikipedia
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Jiaozi (ravioli nke China)